” ဦးဆုံးဖွင့်သည့်တံခါး “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ဦးဆုံးဖွင့်သည့်တံခါး “
” ဦးဆုံးဖွင့်သည့်တံခါး “
Posted by ခင်ခ on Oct 30, 2014 in Creative Writing, Myanma News, Poetry | 23 comments
” လေးပွင့်ဆိုင်သာမက ကျန်သူများပါဝင်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်၊ လာမည့် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လေးပွင့်ဆိုင်သာမက ကျန်သူများပါဝင်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ”
အိုလဘာမားကို မြန်မာပြည် တစ်နှစ်လောက် ခေါ်ထားသင့်လားမသိ။
နိုင်ငံတကာ ဖိအားကို မမှုဘူးသာ ပြောနေတာ။ Airforce One လဲ လာရော မင်းအောင်လှိုင်တို့ ဥသေးစိမ်တို့လဲ ကြီးကိုးကြီး အဓိဌာန် ပြေးဝင်ရတော့တာပဲ … ဟီး ဟီး
Credit to Kyaw Zwa
ကိုခ ကြီး ပြောတဲ့ စတိုင်လ်က… လူပျက်တွေ မင်းသမီး ခေါ်တာ ကျနေတာပဲ…
အိုဘားမားဆီက.. အခုအစိုးရက.. လမ်းဖေါက်ဖို့.. အကူအညီတောင်းဖူးတာ…
ဒေါ်စုက.. တိုင်းပြည်အတွက်… တခုခုတောင်းပေးလိုက်ဖို့သင့်တယ်..။
ကျုပ်သာဆိုရင်တော့.. ကိုကိုးကျွန်းကို.. ကုသသမဂ္ဂ.. နှစ်၁၀၀ ဂရမ်နဲ့ငှားပေးမယ်ဆိုပြီး.. Deal လုပ်ပစ်တယ်..။
အဆောက်အဦး.. အင်ဖရာ.. ကုန်ကျစရိပ်.. ယူအက်စ်ကခံ..။
နောက်အနှစ် ၂၀မှာ.. အဲဒီကျွန်း… ဟောင်ကောင်ကို.. ကျော်မယ်ထင်…။
အိန္ဒိယ-စိနပြည် ဆက်လမ်းကြော (လီဒိုလမ်းမ) ပြန်အသက်သွင်းခိုင်းတာမျိုး..။
မဟာဗျူဟာကျတဲ့.. တောင်းဆိုမှု.. မြန်မြန်လေးလုပ်သင့်ကြောင်း..။
အိုဘားမား နောက် ၂နှစ်ပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း..။
အစည်းအဝေးခမ်းမထဲမှာ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။
ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၃၁) နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ ၌ နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော် ငုရွှေဝါခန်းမတွင်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အပါအဝင်
နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီတို့မှ ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(ဥက္ကဋ္ဌ၊ NLD ပါတီ)၊
ဦးခင်အောင်မြင့် (ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်)၊
ဦးတင်အေး (ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်)၊
ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊
ဦးဋ္ဌေးဦး (ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)၊
UNA ကိုယ်စားပြု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊
NBF ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း၊
FDAကိုယ်စားပြုအဖြစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဦးသိန်းထွန်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ)၊ တို့ပါဝင်တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ မဖြစ်စေရ။
ခေါင်းကို တွင်တွင်ညှိတ်လျက် စိတ်ထဲမှ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ဟု အဆက်မပြတ် ရွတ်ပါ။
ခင်မာလာဘက် တည့်တည့်လှည့်၍ ဖက်လှဲတကင်းပုံ အနည်းဆုံး တစ်ပုံ ပါအောင် ရိုက်ရန်။
ဇာတ်ညွှန်းထဲ မပါသော စကားများ ပြောမိက ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ။
ဤခံတပ်သို့ရောက်ရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူးဟူသော ပေါ့ဆဆအတွေးများ ဖယ်ထုတ်ပါ။
သင်၏အိမ်အပြန် ချောချောမောမောရှိရန် သင့်မိသားစုမှ စောင့်မျှော်လျှက်ရှိသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။)
Credit to Soe Min
ဦးစိုးမင်း စတေးတပ်ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
ယနေ့ အဓိကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ့် ချိုကျိုးနားရွက်ပဲ့တွေကတော့….
၁။ စိန်တစ်လုံး ၊ နွားနို့ နဲ့ နဂါးမောက် လောက် အနာဂါတ်အမြင်ရှိပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးပတ် ပိုက်ဆံလောက် လိုက်ချေးတတ်တဲ့သူ
၂။ ၉၆၉ ကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ်ဆိုပြီး ကတိမတည်တဲ့သူ
၃။ မပြင်ဘူးဟေ့ ဘဘမူဝါဒအတိုင်းပဲ ဆိုတဲ့ ဂျပု
၄။ နှစ်ထောင်ပေးလိုက်ရင် နေ့တွက်ကိုက်ပြီဆိုပြီး ဆွေးနွေးပွဲကထပြန်မယ့်သူ
၅။ ဆီးသီးဗန်းမှောက်ဖူးတဲ့ ဆီးသီးသည်
၆။ ဘက်မလိုက်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ ဒိုင်လူကြီး
၇။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာနေဆဲလူ၊ အမြန်လမ်းမှာ ကားမှောက်ရင် ပ၇ိတ်ရွတ်တာအကောင်းဆုံးလို့အမြင်ရှိသူ
၉။ မ.ဆ.လ အကြွင်းအကျန်သမသမားကြီး
အင်း …. ကျန်တဲ့သူတွေက ဒီလောက်မဟုတ် … ဒီ ၉ ယောက်က ၉ န၀င်းအတွက်အချိန်ကိုက်ပြင်ဆင်ထားသလားထင်ရတယ်။
တကယ့်ကြီးကိုးကြီးကြား တို့လူထုခေါင်းဆောင်ခမျာ အတော်တော့ အာရုံနောက်နေမှာပဲ။
မစဉ်းစားတတ်လို့ အကြံပေးတွေအများကြီးခန့်ထားပြီး ပိုက်ဆံတွေလျှောက်ချေး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတဲ့ နဂါးမောက်သမားက နိုင်ငံရေးထိပ်သီး … တဲ့။
ကတိမတည်တဲ့သူက နိုင်ငံရေးထိပ်သီး … တဲ့။
အချင်းချင်းလှည့်ဖိုက်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကာကွယ်နေတဲ့ ဂျပုက နိုင်ငံရေးထိပ်သီး .. တဲ့။
နှစ်ထောင်လောက်နဲ့ ရောင့်ရဲတတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီရွှေဥာဏ်ရှင်က နိုင်ငံရေးထိပ်သီး … တဲ့။
ဆီးသီးသည်ကလည်း နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး … တဲ့။
ခေါက်ဆွဲစားတဲ့ ဒိုင်ကလည်း နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး …. တဲ့။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာနေဆဲလူက နိုင်ငံရေးထိပ်သီး … တဲ့။
စာရိတ္တပိုင်းအားနည်းရှာတဲ့ ခမောက်သူခိုးလည်း နိုင်ငံရေးထိပ်သီး ပဲ .. တဲ့။
မ.ဆ.လ အကြွင်းအကျန်တွေလည်း နိုင်ငံရေးထိပ်သီးအဖြစ် နေရာရနေဆဲ။
ဟူး …. ဒီလိုလူတွေကို ထိပ်သီးလို့ ဘယ်သကောင့်သား က သတ်မှတ်လိုက်ပါလိမ့်။ ရွှေချထားရမယ့် ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်ပဲ။ ဒီဟာတွေနဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတွေဘယ်လိုများ ဆွေးနွေးရမှာပါလိမ့်။
ဆွေးနွေးပြီးလို့ ပြန်အထွက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲကို ထီးတစ်ချောင်းလောက်သွားထည့်ပေးကြစမ်းပါဗျာ။ အနည်းဆုံးတော့ ရာသီဥတုအတွက်ကာဗာဖြစ်တာပေါ့။
အဲ … ဒါ့အပြင် ဟိုထိပ်သီးတွေကိုလည်း ဟုတ်ရင်ဟုတ် မဟုတ်ရင်တော့ ထီးနဲ့သာသိပ်ခဲ့စမ်းပါလို့။
နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တော်တွင် ပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဆွေးနွေးပွဲတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်တွင်းမှာသာ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံရေးပြဿနာအားလုံးကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်သာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် နိုင်ငံရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်၍ နည်းလမ်းကောင်းများရှာဖွေနိုင်ရန် ဆက်လက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်း သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ဆွေးနွေးပွဲအပြီး လုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။ သို့သော် ဆွေးနွေးပွဲမှကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေ။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောသည်။
‘‘အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ အားလုံးလည်း ဒီလိုပဲ ဆန္ဒရှိတယ်။
ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုးတွေဆက်ဖြစ်ဖို့ သမ္မတကကြိုးစားမယ်လို့ ပြောတယ်’’ဟု ဆွေးနွေးပွဲသို့ ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း (NBF)ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခဲ့သော ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တပ်မတော်နှင့် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုအချို့ရှိသော်လည်း မိမိသည် တပ်မတော်ကိုချစ်ခင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ဟုလည်း ဦးရဲထွဋ်က ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲမစမီ သမ္မတက အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစု များအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ ရှာဖွေကြရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ဆက်လက်ပြောသည်။
သမ္မတက ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်ပိုင်း၊ ၂၀၁၅ အစပိုင်းတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူချက် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်အရေးကြီးပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံမူဘောင်များ ချမှတ်နိုင်မှသာ ၂၀၁၆ တွင် တက်လာမည့်အစိုးရကို မည်သူပဲတာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
“အများစုနဲ့ အနိုင်ယူခြင်းအစား လူနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အလေးထား”ရန် ကာချုပ် တိုက်တွန်း
နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော် ငုရွှေဝါခန်းမတွင် ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးဝိုင်းမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တယ်။ သို့သော် စည်းကမ်းကို အားလုံးကလည်း လိုက်နာဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ နောက်တခုက ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းပြီးတော့မှ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုတွေ ရှောင်ရှားဖို့၊ နောက်တခါ ကျနော်တို့ ဥပဒေများ ပြုတဲ့အခါမှာလည်း မဲဆန္ဒအများစုနဲ့ အနိုင်ယူခြင်းအစား လူနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒတွေကိုလည်း ဥပဒေနဲ့ ညီညွှတ်လို့ရှိရင် အလေးဂရုပြုပြီးတော့မှ တူညီသော ဆန္ဒကို ရယူပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဒီကနေ့ လိုအပ်ချက်က တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ အဲဒီအချက်အလက်ကို အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့၊ နောက်တခါ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေဟာ ပြည်သူတွေ အားလုံးကို ဒုက္ခရောက်စေတယ်။ တဖက်ကလည်း နိုင်ငံရေး အမြင်ကွဲပြားမှုတွေကို လက်နက်ကိုင် နည်းလမ်းအားဖြင့် ဖိအားပေး ၊ အသာစီး ရယူဖို့ ကြိုးပမ်းခြင်းဟာလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ထိခိုက်စေတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်။ တပ်မတော် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ ၆ ခုကို ကျနော်တို့ ဆုပ်ကိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောသွားကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြန်လည်ပြောပြသွားပါတယ်။
တရုတ်ကားတွေထဲ က အတိုင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် ….
“ပြောတာကောင်းတယ်၊ မပြောတာ ပိုကောင်းတယ်” ဆိုသလိုပဲ။
ကိုယ့် လုပ်ရပ်နဲ့ မညီတဲ့ အပြောတွေ အရှက်မရှိ ပြောသူက ပြော။
ဆိုတော့ ကာ သူ ပြောတာ….
NLD ကို ထောက်ခံနေတဲ့ လူ အများစုဟာ
စစ်တပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ လူနည်းစုကို အနိုင်မကျင့်ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား သတ်မဒေါ် ကာချုပ်ကြီးရဲ့ ဟဲ့ဟဲ့?????
ပြီးရင် ဒုံရင်း ဒုံရင်း ဖြစ်သွားမှာ။
တင်းမာမှုတွေ အိုဗားမား လာခါနီးလျော့ကျအောင် ထမီအောက်ပြေးဝင်တဲ့ အကွက်တွေ။
ဥသေးစိမ်ကလည်း “မိဘပြည်သူများ ခံဗျား” ဆိုပြီး ဆက်ခံခိုင်းး
ကာချုပ်ကလည်း ဆက်သတ် အဲ သတ်မဒေါ်ဂျီးကို ဆက်လက် တာဝန်ယူ
မန်းမန်းတို့ကလည်း ဟိုပြောဒီပြော ဆက်ပြော…
ရင်ခုန် မျှော်လင့်မိတဲ့ ကိုယ်တွေက မှားနေသေးးး
ဒင်းတို့ အမျိုးတွေကလွဲရင် နိုင်ငံ ဘာတစ်ခုမှ မကောင်းသေးလို့ အကောင်းကို မမြင်နိုင်သေးတာ။
ကောင်း များ ကောင်း လာ လေ မ လား လို့ မျှော် မိ တာ ပါ ဒါ လည်း ဒို့ တိုင်း ပြည် ဒို့ ပြည် သူ တွေ အ တွက် ပေါ့ ဗျာ။
ဖြစ် လာ တာ ဖြစ် မ လာ တာ တော့ ပိတ် ကား ကြီး ပေါ် ဆက် ရှု ရ မှာ ပေါ့။
ကျုပ် တို့ ခေါင်း ဆောင် အ မေ စု တောင် ဒို့ တိုင်း ပြည် အ တွက် မ သေ ချာ မှန်း သိ ပင် သိ သော် ငြား လည်း သူ တို့ တွေ နဲ့ တွေ့ ကြည့် ကြည့် သေး တာ ဘဲ လေ။
နိုင် ငံ ရေး ဆို တာ တစ် ခါ တ ရံ ရင် ခုန် အောင် လုပ် တတ် ပါ ရဲ့။
၊သူ့တို့ကတော့ ပြောနေလည်း မထူးပါဘူးးး
စိတ်လျှော့ပြီး ၂၀၁၅ အတွက် ကိုယ့် မဲ တစ်ပြားကို သေချာအောင် စီစဉ်တာကောင်းပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘဲ သူရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လက်ရှိဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖို့၊ အစိုးရသစ်မပြောင်းခင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နဲ့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့ အချက် ၃ချက်ကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး အသေးစိတ် ထုတ်ပြောဖို့ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၆ နှစ်လုံးလုံး သူ့ဘဝ၊ သူ့မိသားစု၊ သူ့အရေး ကို ပစ်ထားတဲ့သူက ပုဂ္ဂလိက သဘောဆန္ဒ ပြောသတဲ့လား ??
အဲဒီ ဥရဲထွဋ်ကြီးက မျက်မှန်စိမ်းကြီး တပ်ပြီး ပြောတာလေ။
အစိမ်း အစိမ်း ချင်းမှ သူ့မျက်မှန်က အဖြူပြောင်းတယ်တဲ့။
အဲဒီ ၀န်ကြီးနေရာရဖို့ကိုလဲ ချော်လဲခြေထိုး တတ်ပါရဲ့ဗျာ။
“ကျုပ်ပြောချင်တာက ဒီအစိုးရကိုမယုံဘူး! ဒါဘဲ!!”
သတင်းနေပြည်တော် နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်မထွက်
ယနေ့ မနက် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမှ မည်သည့် ရလဒ်မျှမထွက်ခဲ့ဘဲ တက်ရောက်သူများက ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်များကိုသာ ပြောဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထားမဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိက သဘောဆန္ဒကို တင်ပြဆွေးနွေးကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သည့်အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးသည်ကို မေးမြန်းရာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ တိုက်ရိုက်မေးပါ”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
၁) လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု၎င်း
၂)နောက်အစိုးရမပြောင်းခင် အပစ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ခိုင်မာစေမည်ဟု၎င်း
၃)၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကို အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းဖော်ဆောင်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်ဟု၎င်း အချက် ၃ ချက်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုတွေ့ဆုံပွဲသည် နေပြည်တော်တွင် ရှေ့လ ကျင်းပမည့် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား လာတက်မည့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် အမေရိကန်-အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲများ မတိုင်မီ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ဖြစ်လာခဲ့သဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုများ ရှိနေသလားဟု မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။
ကြာသပတေးနေ့ကလည်း အိုဘားမားက ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ တဦးချင်းထံ သီးခြားစီခွဲပြီး တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၀ါရှင်တန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ကို ကိုးကားပြီး ဗီအိုအေသတင်းဌာနက သတင်းပေးပို့သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၊ ဦးရွှေမန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တို့အပြင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး ၊
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းတင် ၊
ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်း သားများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဦးခွန် ထွန်းဦး ၊
ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့(FDA) ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေ ၊ တိုင်းရင်းသား ညီနောင်များ ဖက်ဒ ရေးရှင်း(NBF) အဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင် လည်းဖြစ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဦးစိုင်းအိုက် ပေါင်း စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့လည်း မူကော လူကော မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေအတွက် ရင်လေးဖွယ်ပါပဲ။
Doll House က တံခါး လို ဝင်မရတာလေးဘဲ။
တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့် နား